realme C11 က Budget ဖုန်းတွေထဲမှာ ရွေးစရာဖြစ်နေမလား?
realme C11 နဲ့ Entry Level Smartphones. ဒီ Market ဟာ နည်းပညာနဲ့ လက်ပွန်းတတီးရှိတဲ့သူတွေအတွက် ပျင်းစရာအကောင်းဆုံး Segment လို့တောင် သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အသိတစ်ယောက်ကို ဖုန်းဝယ်ပေးဖို့ Mobile Image ကို တစ်ရက်ထဲ ၂ ခေါက်ရောက်သွားချိန်မှာတော့ ပစ္စည်းပြတ်အောင် ရောင်းကောင်းတဲ့ ၁ သိန်းနဲ့ ၂ သိန်းကြားက Entry Level Phone တွေအပေါ် ဝယ်လိုအားကို အံ့အားသင့်ခဲ့ရတယ်။
ဒီ Article မှာ First Impression လုပ်ပေးမယ့် realme ရဲ့ C11 ဟာ လည်း ဒီ Target Market ကို အသစ်ဝင်ရောက်လာမယ့် Entry Smartphone လေးတစ်လုံး ဖြစ်နေပါတော့တယ်။
တကယ်တော့ C Series ဟာ realme ရဲ့ Entry level မှာ ယှဉ် Fight ဖို့ ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Smartphone တွေပါ။
နောက်ဆုံး Helio G80 လို Entry Gaming SoC ထည့်ပေးထားတဲ့ C3 လို ဖုန်းမျိုးကို ဈေးကွက်ထဲမှာ လူအများလည်း ရင်းနှီးပြီးဖြစ်လောက်မှာပါ။
ဒါပေမယ့် အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက် တခြားရွေးချယ်စရာ Smartphone တစ်လုံးကို ၁သိန်းစွန်းစွန်းဈေးမှာ ရနိုင်ဦးမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းအတွက် C11 ဟာ realme ရဲ့ အဖြေတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ ကိုယ်တွေတော့ ယူဆမိတယ်။
realme C11 ကို Mint Green နဲ့ Pepper Grey ဆိုပြီး အရောင်နှစ်မျိုးရနိုင်မှာပါ။
စျေးနှုန််းအားဖြင့် 32/2 GB ကို မြန်မာငွေ ၁ သိန်း ၄ သောင်း ၉ ထောင် ၉ ရာ (၁၄၉,၉၀၀) ကျပ်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဗူးလေးက အတော်ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်ရှိတယ်။ ပါကင်မို့လို့ထင်ရဲ့၊ အတော်ကြပ်တယ်။ (ဗူးခွံဖွင့်တာကိုပြောပါတယ်) အတော်လေး အားထည့်ဖွင့်ယူရတယ်။
ကိုယ်တွေရတဲ့ Unit ပဲဖြစ်တာလားတော့ မပြောတတ်။ ဖုန်းထည့်ထားတဲ့ Plastic အိတ်ကလည်း ကော်အရမ်းကပ်နေလို့ မနဲခွါယူလိုက်ရလေးတစ်ချက်ကို စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်မိ။
Entry level smartphone ပီပီ ဗူးထဲမှာ အညွှန်းစာရွက်တစ်ချို့နဲ့ အားသွင်းကြိုး၊ တုံး ကလွဲပြီး အပိုဘာမှ ပါမလာခဲ့ဘူး။
(ဘာပဲဖြစ်ြဖစ် ၁ သိန်းကျော်တန်ဖုန်းမှာ 10W Charger လေး ထည့်ပေးသေးတာပဲ ကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့လေ 😎) Charger ခေါင်းရော Adaptor ပေါက်လေးတွေမှာပါ Realme ထုံးစံအတိုင်း အဝါရောင် Color လေးတွေနဲ့ပါ။
ဖုန်းရဲ့ကျောဘက်မှာ ပထမဆုံးသတိထားမိတာလေးက သူ့ Camera Design ပါ။ အရင်လို ဘယ် Model လာလာ အတန်းလိုက်မဟုတ်တော့ပဲ လေးထောင့် Box လေးမှာ Camera ၂ လုံးရယ်၊ Flash light ရယ်၊ AI Camera ဆိုတဲ့ ဒေါင်လိုက်စာတန်းလေးရယ် ပုံဖော်ထားတာက ကူးတယ်ပဲပြောပြော အရင်ထက် ပိုကြည့်ကောင်းတယ်။
Camera ကြီး အရမ်းဖုထွက်မနေတာလေးကလည်း သဘောကျစရာ အချက်တစ်ချက်လို့မြင်တယ်။
မီးခိုးရောင် (Gray) ဆိုတာ ကိုယ်တွေအတွက်တော့ ဖုန်းတစ်လုံးပေါ်မှာ ပျင်းစရာအကောင်းဆုံးအရောင်ပါ။
ဒါပေမယ့် realme မှာ Camera box ကနေ ဒေါင်လိုက်ဆင်းသွားတဲ့ realme Logo ပါတဲ့အတန်းကို ကျန်တဲ့ ကျောဘက် Cover နဲ့ Texture ချင်းမတူအောင် လုပ်ထားတာလေးက ရိုးရိုးလေးနဲ့ဆန်းတယ်လို့ ခံစားရတယ်။
နောက်ပြီး Plastic သုံးတာချင်းအတူတူမှာ ပြောင်ချောချော Glossy ဖြစ်တာတွေထက် Texture လေးနဲ့ Matte Finish က ကိုယ်တွေ Personally ပိုသဘောကျတဲ့ ဖုန်းကျောဘက်ရဲ့ Look & Feel ပါ။
ဒါကြောင့် First Impression မှာ Design အရ C11 ပေးရတဲ့ဈေးထက် ပိုတန်တဲ့ ခံစားချက်ကို ရတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
6.5” Display က ပုံမှန် Social Media Usage အတွက် အနေတော်ပဲ။ Waterdrop Notch နဲ့ပါ။ Chin ထူတာနဲ့ Color နဲ့ Brightness မှာ မဆိုးသည့်တိုင် 720p ဖြစ်နေတာကတော့ အားနည်းချက်လို့ ပြောရမှာပဲ။
ရိုးရှင်းတာ သဘောကျတတ်သူတွေအတွက် realme UI က မဆိုးလှ။ Google App တွေလည်း တစ်ခါတည်းစုံစုံလင်လင်ပါတယ်။ (စုံတာမှ ၁၄ခုလုံး ထည့်ပေးထားတာ)
သုံးတာ၊ မသုံးတာထား၊ စဖွင့်ဖွင့်ချင်း Phone Set up လုပ်ချိန်မှာ Unicode နဲ့ Zawgyi စိတ််ကြိုက်ရွေးခွင့်ပေးထားသေးတာက ခုထိ Zawgyi သုံးနေ၊ သုံးချင်တဲ့ user တွေအတွက် အဆင်ပြေလွယ်ကူလိမ့်မယ်။
တစ်ခုရှိတာက Playstore အပြင် App Market တစ်ခုပါ ထပ်ပါလာတာ။ (ရွေးစရာပိုအောင် ထည့်ပေးတယ်ပဲ မှတ်လိုက်ပါတယ်) 3rd Party App အနေနဲ့တော့ Opera နဲ့ Lazada ဆိုတဲ့ Online Market app နှစ်ခုတော့ အဆစ်ပါလာတာတွေ့ရတယ်။
2GB RAM ကြောင့်ထင်ပါရဲ့။ App အဝင်၊ အထွက်နှေးတာ၊ တစ်ချက်တစ်ချက် ထစ်တာလေးတွေကတော့ ဒီဈေးမှာ ပေးဆပ်လိုက်ရတဲ့အချက်တွေလို့ပဲ မှတ်လိုက်ပါ့မယ်။
Dual Sim ကိုမှ SD Card Slot သပ်သပ်ထည့်ပေးထားတယ်။
Headphone Jack နားကြပ်ပေါက် ပါတယ်။
Mediatek ရဲ့ Helio G35 SoC သုံးထားလို့ Social Media နဲ့ ဂိမ်းအသေးတွေဆော့ဖို့တော့ ကောင်းကောင်းအဆင်ပြေမယ်။
5,000 mAh Battery ကို 720p Display နဲ့ဆိုတော့ အားကောင်းကောင်းခံဖို့ မျှော်လင့်လို့ရမယ်။
ကျောဘက်မှာ 13MP Main+ 2MP Depth, Selfie မှာ 5MP ပါမယ်။
(Camera နဲလို့ဆိုပြီး အထင်တော့ မသေးသင့်၊ Night Mode, Shutter Speed 16sec, ISO 6,400 ထိ ရတဲ့ Expert Mode တွေနဲ့ဗျား)
Type C မပါပါဘူး၊ Micro USB နဲ့ပါ။ Adaptor ကတော့ 10W ပါ။
Fingerprint Scanner မပါပါဘူး။ Face Unlock နဲ့ပဲ သုံးရမှာပါ။ (Face Unlock ကလည်း နှေးပါတယ်)
IR Blaster မပါဘူး။ (ထည့်ပေးသင့်တယ်ထင်တာပဲ)
Basic Version ကို RAM 3GB လောက် ထည့်ပေးစေချင်မိ။ ခေတ်က 2GB RAM ကို ဘယ်လိုသုံးသုံး နဲတယ်ဆိုတဲ့ ခေတ်ရောက်နေပြီလေ။
စရိတ်လျှော့တာလည်း လျှော့တာဆိုပေမယ့် Silicon cover အကြည်လေးဖြစ်ဖြစ်ပါရင် ပိုဝမ်းသာမိမှာပါ။
ဒါတွေကတော့ C11 အပေါ် First Impression မှာ ကြုံရ၊ ခံစားမိတဲ့ အကောင်း၊ အဆိုးနဲ့ အားရခြင်း၊ အားမရခြင်းတွေပါ။ သူ့ overall feature တွေမှာ အရမ်းမက်လောက်စရာ အနေနဲ့ တွေ့ချင်မှ တွေ့ရလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် စျေးသက်သာဖို့ကလွဲပြီး အများကြီးမျှော်လင့်မထားရင် Global Official Phone တစ်လုံးအနေနဲ့ သူ့စျေးတန်းတစ်ခုမှာ ပြန်ရတဲ့ပမာဏက နေရာအတော်များများမှာ ပေးပျော်တယ်ဆိုတဲ့ feeling မျိုး ရနိုင်မှာပါ။
အထူးသဖြင့် 1 year warranty ပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့ ဒီစျေးမှာ ကိုင်ရတာကလည်း စိတ််လုံခြုံမှုတစ်မျိုးလို့ ပြောရမှာပေါ့။ ဒီလောက်နဲ့ပဲ First Impression ကို အဆုံးသတ်ပါရစေ။
realme C11 Homepage
OnePlus ရဲ့ Mid-range စမတ်ဖုန်းသစ်မှာ ပါဝင်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ အချက်များ